Erey-bixinta DUUR-JOOGTA iyo Soomaalida!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna July 8, 2015	0 301 Views
Hadaba, caanay daatayba dabadood laqabaye; miyaanay ahayn waqtigii aynu Duur-joogteenna ka fikiri lahayn oo beri siday nagu ahaan jireen maanta aan ka yeelno?!
Xigasho–buuggga Duurjoogteenna oo uu qoray Zakariya Hassan Hiraal.
Previous: Daawo qiimaha ay midnimadu leedahay!!
Next: Abuurka iyo Baxaalliga Libaaxa!!
Qoys Muslim ah oo Qarni ka badan ilaaliya Kaniisad ku dhex taal Xaafaddooda!